MADOOBE oo ka digay arrin la sheegay in DF ay ka waddo BAYDHABO - Caasimada Online
Home Warar MADOOBE oo ka digay arrin la sheegay in DF ay ka waddo...
MADOOBE oo ka digay arrin la sheegay in DF ay ka waddo BAYDHABO
Muqdisho (Caasimada Online) – Xildhibaan Aadan Maxamed Nuur “Aadan Madoobe” ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee ka jirta deegaanada Koofur Galbeed, gaar ahaan magaalada Baydhabo oo dhawaan doorasho ay ka dhaceyso.
Xildhibaan Aadan Madoobe , ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay faragelin toos ah ku leedahay doorashada Koofur Galbeed, waxaana uu ka digay in haddii faragelinta sii socoto aysan halkaasi ka dhici doonin wax lagu wada qanacsan yahay.
Sidoo kale wuxuu sheegay in Shacabka Koofur Galbeed ay yihiin kuwo dulqaadan badan oo aan dooneyn in wax lagu qasbay ay hogaamiyaan, taasina ay caqabad noqon doonto haddii ay dhacdo.
Isaga iyo xildhibaano kale ayaa magaalada Baydhabo ku sugnaa muddooyinkii ugu dambeeyay, waxaana marar badan ay dhaliileen hanaanka dowladda Soomaaliya ay wax u wado.
Xildhibaanka ayaa sidoo kale ka digay in musharixiin gaar ah laga hor istaago inay tartamaan, waana cadaadiska ugu weyn ee saarnaa guddiga doorashada maamulka Koofur Galbeed.
“Waxaan dareemeynaa jajuub, Soomaaliya Jajuub kama soconayo, dastuur ayaa jira oo lagu heshiiyay, dhibaato in halkaan laga abuurana ma dooneyno, Shacabka waxay rabaan ayaa halkaan ka soconayo, kama socon doonaan waxa dowladda rabto”ayuu yiri Aadan Madoobe.
Magaalada Baydhabo ee gobolka Baay, waxaa ka socdo ololihii ugu dambeeyay ee doorashada Koofur Galbeed oo lagu balansan yahay 5 Bisha soo socoto ee December.